Midabyo cusub, maya "iPhone" dhabarka iyo batari badan oo loogu talagalay iPhoneka cusub ee 2019 | Wararka IPhone
Midabyo cusub, maya "iPhone" dhabarka iyo batteri badan oo loogu talagalay iPhone-ka cusub ee 2019
Muddo bil ah ayaa ka hartay inta la soo bandhigayo iphone-yada cusub ee sanadkan, waxayna umuuqataa in wax yar ay harsan tahay in la shaaciyo mid ka mid ah bilowga sanadka ee la filayo, sida had iyo jeer dhacda xilligan. Laakiin maanta xanta cusub ayaa toos nooga imaaneysa Foxconn gudaheeda, oo aan faahfaahin la hayn illaa iyo hadda.
Shaqaale la sheegay inuu ka shaqeynayay warshadda ay ku xiran tahay taleefanka iPhone-ka ayaa shaaca ka qaaday inay jiri doonaan ugu yaraan hal midab oo cusub, cagaar madow ah erayga "iPhone" ayaa laga waayi doonaa dhabarka taleefanka casriga ah ee Apple, iyo in kan ku xigga iPhone-ka ee iPhone XS Max uu yeelan doono batari 3.969 mAh ah. Faahfaahin dheeraad ah hoos.
Faahfaahinta qaar ka mid ah faahfaahinta uu sheegayo shaqaalahan Foxconn horeba waa loo ogaa, laakiin kuwa kale ayaa gebi ahaanba cusub ama waxay xaqiijiyeen qaar ka mid ah kutiri kuteen hore u daatay oo aan faahfaahin badan laga hayn. Tusaale ahaan eMidabka madow ee cagaaran ee iPhone XR maahan markii ugu horeysay ee uu ka soo muuqdo warka xanta, iyo sidoo kale dhameyntaas matte-ka ah ee Ming-Chi Kuo uu horay noogu sheegay oo ku saabsan ka dhigaysa a
Wax ilaa iyo hadda aan waligeed laga wada hadlin waa taas magaca taleefanka casriga ahi wuxuu ka baaba’aa dhabarkiisa. Apple ayaa magacaas ku saari kara tallaabo aan la fileynin, iyo waqti ay adag tahay in mararka qaar la sheego jaleeca taleefanka gacanta ee gacanta lagu haysto maxaa yeelay ku dhowaad qof walba ayaa soo guuriyey naqshadda taleefanka Apple.
Waxyaabo kale oo cusub oo ay daadadkan cusub na keeneen oo kuwa badan ka farxin doona ayaa ah kororka awoodda batteriga ee kan beddelaya iPhone XS Max. Haddii nooca hadda jira uu leeyahay batari 3,174 mAh ah, moodeelka cusub ee bilaabaya deyrtan wuxuu garaaci doonaa 3,969 mAh, koror aad u badan oo laga yaabo inuu la xiriiro suurtagalnimada u oggolaaneysa qalabka kale in dib loo soo celiyo sida Galaxy S10 horeyba u sameysay.
Marka laga hadlayo naqshadeynta, sida loo dejinayo kaamirooyinka ama awoodaha la heli karo, wax isbadal ah lagama filayo wax walba oo ilaa hada la sheegay. Oo waxaan ku sii wadaynaa isku xiraha Danabka, ma jiro USB-C.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Midabyo cusub, maya "iPhone" dhabarka iyo batteri badan oo loogu talagalay iPhone-ka cusub ee 2019
Macdan qodayaasha siiya Apple dahab ayaa u ballanqaaday deegaanka
Saddex sano oo xabsi ah iibinta aaladaha Apple ee beenta ah